Sport Views – Page 32 – Daily Latest Sport News
ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ကာဗာနီကိုခေါ်ယူဖို့ ဘာစီလိုနာကြိုးပမ်းသွားမယ်
September 27, 2021 sportviews 0
လာလီဂါထိပ်သီးဘာစီလိုနာအသင်းဟာ လာမယ့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်ဖွင့်လှစ်မယ့်အချိန်ကျရင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဥရုဂွေးဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကာဗာနီကို ခေါ်ယူဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ကွင်းတွင်း၊ ကွင်းပြင်မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီး ရလဒ်တွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေလို့ နည်းပြ ရော်နယ်လ်ကိုးမန်းဟာ မကြာခင်ကာလအတွင်းရာထူးကအထုတ်ခံရဖို့နီးစပ်နေပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းနည်းပြမာတီနက်ဇ်၊ ကာတာကလပ် အယ်လ်ဆက်ဒ်အသင်း နည်းပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အသင်းဂန္ထဝင်ကစားသမားဇာဗီတို့ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ဦးဦးကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်မယ်လို့သတင်းထွက်နေတာပါ။ […]
ယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းလိုက်ကစားပုံ အခုထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်ပြေခဲ့တဲ့ာဂယ်ရီနဗီးလ်
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်နောက်ခံလူဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂယ်ရီနဗီးလ်က ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ဆိုရင် အသင်းလိုက် ကစားပုံ အခုထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ကို ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ” ကျွန်တော်က သူတို့ရှုံးတော့မှ ဒီလို စကားမျိုး ထပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ နိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာကတည်းကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ အသင်းလိုက် ကစားပုံကောင်းဖို့ […]
ဆိုးလ်ရှားအထုတ်ခံရအောင် အဖိုးတန်ပင်နယ်တီအားတမင်ထောင်ကန်ခဲ့သလား ဘရူနို?
မန်ယူပရိသတ်များကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာနည်းပြအိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရအောင် ဗီလာနှင့်ပွဲစဉ်တုန်းကနာကျင်အချိန်ပိုတွင်ရရှိတဲ့အဖိုးတန်ပင်နယ်တီအားတမင်ထောင်ကန်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ? ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာစနေနေ့တုန်းကအိုးထရက်ဖို့ဒ်ကွင်းတွင်အက်စတွန်ဗီလာအား၁-၀ဂိုးဖြင့်ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲစဉ်မှ ာနာကျင်အချိန်ပိုတွင်ရရှိတဲ့ပင်နယ်တီကိုအပေါ်သို့အပြင်းထောင်ကန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီစတားဟာပင်နယ်တီကန်ရာတွင်သွေးအလွန်အေးသူဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပင်နယ်တီ၂၃ကြိမ်တွင်၂၂ကြိမ်အထိဝင်အောင်ကန်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်းမန်ယူပရိသတ်များကဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာပင်နယ်တီအားမဝင်အောင် တမင်အပြင်းကန်ပြီးထောင်ကန်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းတွင်တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာပင်နယ်တီကိုမဝင်အောင်အလွန်အားပါစွာကန်ခဲ့တာတွေ့ရပြီ း၂၀၁၁ခုနှစ်တုန်းကဘလက်ဘန်းအား၃-၀ဂိုးဖြင့်ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲတွင်စတီဗင်ဂျရတ်ပင်နယ်တီလွဲချော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ပင်နယ်တီလွဲချော်မှုအတွက်မန်ယူပရိသတ်များကိုတောင်းပန်မှုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ၎င်းကလာမယ့်ပင်နယ်တီများကိုကန်သွားဦးမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ ZawGyi ဆိုးလ္ရွားအထုတ္ခံရေအာင္ ပင္နယ္တီ မဝင္ေအာင္ ဖာနန္ဒက္စ္တမင္ ေထာင္ကန္ခဲ့သလား? မန္ယူပရိသတ္မ်ားကဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ဟာနည္းျပအိုလီဂန္းနားဆိုးလ္ရွားရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေအာင္ ဗီလာႏွင့္ပြဲစဥ္တုန္းကနာက်င္အခ်ိန္ပိုတြင္ရရွိတဲ့အဖိုးတန္ပင္နယ္တီအားတမင္ေထာင္ကန္ခဲ့တယ္လို႔ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ဟာစေနေန႔တုန္းကအိုးထရက္ဖို႔ဒ္ကြင္းတြင္အက္စတြန္ဗီလာအား၁-၀ဂိုးျဖင့္ရႈံးနိမ့္တဲ့ပြဲစဥ္မွာနာက်င္အခ်ိန္ပိုတြင္ရ ရွိတဲ့ပင္နယ္တီကိုအေပၚသို႔အျပင္းေထာင္ကန္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေပၚတူဂီစတားဟာပင္နယ္တီကန္ရာတြင္ေသြးအလြန္ေအးသူျဖစ္ၿပီးေနာက္ဆုံးပင္နယ္တီ၂၃ႀကိမ္တြင္၂၂ႀကိ မ္အထိဝင္ေအာင္ကန္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္းမန္ယူပရိသတ္မ်ားကဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ဟာပ င္နယ္တီအားမဝင္ေအာင္ […]
အသင်းဟောင်းဂျူဗင်တပ်က ပေါ့ဘာကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ မန်ချက်စတာသက်တမ်းတိုယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့စာချုပ်းဖို့ မသေမချာဖြစ်နေတဲ့ သူတို့ကွင်းလယ်လူဟောင်းပေ့ါဘာကို ပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အီတလီဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရူဒီဂယ်လက်တီက သူ့ Twitter မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ပေ့ါဘာရဲ့လက်ရှိစာချုပ်က လာမယ့်နှစ်၊နွေရာသီကျရင် သက်တမ်းပြည့်မှာဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက်အသင်းက သူ့ကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် အဆင်မပြေသေးဘဲ တကယ်လို့ ဇန်နဝါရီလမတိုင်ခင်အထိ စာချုပ်သစ်ကိစ္စအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ ရာသီကုန်မှာ အလွတ်နဲ့မဆုံးရှုံးရအောင် ပေ့ါဘာကို ထုတ်ရောင်းသွားဖို့ရှိနေပါပြီ။ […]
ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှူးဟာလန်းကို လာမယ့်နှစ်အတွင်း ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စစ်မှူးမာစီယဲလ်နဲ့ အစားထိုးဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ မာစီယဲလ်ဟာ ဒီရာသီယူနိုက်တက်အသင်းမှာ ပုံမှန်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေပြီး အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့နီးစပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ မာစီယဲလ်ရဲ့ခြေစွမ်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယူနိုက်တက်အသင်းက စိတ်ပျက်နေတာကြောင့် သူ့အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိလာရင် လက်ခံစဉ်းစားသွားမယ့်အနေအထားပါပဲ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တုန်းက မိုနာကိုအသင်းကနေ […]
အက်စတွန်ဗီလာနာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ အဘွန်လဟော်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဆိုးလ်ရှားကို ရာထူးကထုတ်ပယ်ပြီး ကွန်တီနဲ့အစားထိုးခန့်အပ်သင့်တယ်လို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့ ယန်းဘွိုင်းစ်နဲ့ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာပဲ လိဂ်ဖလားတတိယအဆင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် ဝက်စ်ဟမ်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ(၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့သလို ၂၀၀၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကလည်း အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာပဲ (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အက်စတွန်ဗီလာအသင်းဟာ […]
ဟာလန်းအားရောင်းချရန် ငွေကြေးဖိအားမရှိကြောင်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ဟန်ဂျိုးအာချင်ဝတ်ဇ်ကီ
ဒေါ့မွန်စီအီးအိုဟန်ဂျိုးအာချင်ဝတ်ဇ်ကီက၎င်းတို့တွင်အာလင်းဟာလန်းအားလာမယ့်နွေရာသီ ဈေးကွက်တွင်ရောင်းချရန်ငွေကြေးဖိအားတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အသက်၂၁နှစ်ရှိနော်ဝေတိုက်စစ်မှူးဟာပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးကလပ်များဖြစ်ကြတဲ့ မန်စီးတီး၊ ယူ၊လီဗာပူးအပါအဝင်ဥရောပထိပ်သီးကလပ်အမြောက်အမြားတို့ရဲ့ပစ်မှတ်ထားခြင်းခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ ဟာလန်းဟာယခုရာသီမှာဒေါ့မွန်အသင်းအတွက်၈ပွဲကစားထားရာမှာ၁၁ဂိုးသွင်းယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမန်မီဒီယာများရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒေါ့မွန်ဟာရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများကိုငွေကြေးပေးအပ်ရန်ငွေလိုအပ်နေမှုကြောင့် အသင်းကိုစတော့အိတ်ချိန်းတွင်ဝင်ရောက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဝတ်ဇ်ကီက “နွေရာသီမှာသူ့ကိုရောင်းရမလားဆိုတာကိုတောင်ကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်ရ သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတုန်းပါ။စကော့အိတ်ချိန်းမှာစာရင်းတင်ထားလို့ ဟာလန်းကိုရောင်းရတော့မယ်လို့တစ်ချို့တွေပြောနေကြတာကြားပါတယ် စကော့အိတ်ချိန်းမှာအရောင်းစာရင်းမှာတင်လိုက်တယ်ဆိုတာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပါ”လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အာလင်းဟာလန်းဟာလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်၆၄သန်းမှ ပေါင်၈၆သန်းအတွင်းကြေးဖြင့်ထွက်ခွာနိုင်အချက်ကိုစာချုပ်အတွင်းမှာချုပ်ဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းများအရသူ့ကိုပေါင်၇၇သန်းဖြင့်ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ZawGyi ဟာလန္းအား ေရာင္းခ်ရန္ ေငြေၾကးဖိအား မရွိေၾကာင္း ေဒါ့မြန္စီအီးအိုေျပာၾကား ေဒါ့မြန္စီအီးအိုဟန္ဂ်ိဳးအာခ်င္ဝတ္ဇ္ကီက၎တို႔တြင္အာလင္းဟာလန္းအားလာမယ့္ေႏြရာသီအေျပာင္းအေ႐ ႊ႕ေဈးကြက္တြင္ေရာင္းခ်ရန္ေငြေၾကးဖိအားတစ္စုံတစ္ရာမရွိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ […]
၁၀ လကြာနားရပြီးနောက်ပထမဆုံးပြန်ကစားနိုင်တဲ့ပွဲမှာ ၉မိနစ်အကြာမှာဘဲ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်ပါရမီရှင်ဆန်ဆူးဖာတီ
ဘာစီလိုနာလူငယ်ပါရမီရှင်ဆန်ဆူးဖာတီဟာမနေ့ညတုန်းကလီဗန်တေးအား၃-၀ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာမှပြန်လည်ကောင်းမွန်ကာပထမဆုံးပွဲအဖြစ်ဝင်ရောက် ကစားခဲ့ရာမှာဂိုးပါသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်၁၈နှစ်ရှိစပိန်လက်ရွေးစင်စတားဟာ ဒူးဒဏ်ရာကိုလေးကြိမ်တိုင်တိုင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရကာ၁၀လအထိအနားယူလာခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့ခြေရာကိုဆက်ခံမယ့်ကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဖာတီဟာ မက်ဆီထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ကျောနံပါတ်၁၀ကိုဆက်ခံခွင့်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖာတီဟာလီဗန်တေးအား၂-၀ဂိုးဖြင့်ဦးဆောင်နေတဲ့ပွဲချိန်၈၂မိနစ်မှာလူစားဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့ကျောနံပါတ်၁၀ကိုဆက်ခံခွင့်ရထားတဲ့သူဟာလူစားဝင်ရောက်လာပြီ း၉မိနစ်အကြာမှာဘဲကိုက်၂၀အကွာကနေလှပတဲ့ဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လီဗန်တေးအားအနိုင်ရတဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာအတွက်ကျန်အနိုင်ဂိုးနှစ်ဂိုးကိုမမ်ဖစ်ဒီပေးနှင့် လုခ်ဒီဂျောင်တို့ကသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနည်းပြကိုးမန်းဟာလည်းလီဗန်တေးအားဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့မှုအတူ ဖိအားအနည်းငယ်လျှော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုးမန်းဟာသုံးပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်မှုကြောင့် အနာဂတ်မရေမရာဖြစ်နေခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ZawGyi ၁၀ လၾကာနားရၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးျပန္ကစားႏိုင္တဲ့ပြဲမွာ ၉ မိနစ္အၾကာမွာဘဲ ဂိုးသြင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာနံပါတ္၁၀ ပိုင္ရွင္သစ္ဖာတီ ဘာစီလိုနာလူငယ္ပါရမီရွင္ဆန္ဆူးဖာတီဟာမေန႔ညတုန္းကလီဗန္ေတးအား၃-၀ ဂိုးျဖင့္အႏိုင္ရရွိတဲ့ပြဲမွာဒဏ္ရာမွျပန္လည္ေကာင္းမြန္ကာပထမဆုံးပြဲအျဖစ္ဝင္ေရ […]
စပါးစ်နှင့်ပွဲမှာ ယခုရာသီအကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရမ်ဒဲလ်
အေရွန်ရမ်ဒဲလ်ဟာမနေ့ညတုန်းကစပါးစ်နှင့်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာယခုနှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီရဲ့ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဂိုးသမားဟာပွဲပြီးခါနီး၉၁မိနစ်မှာလူးကပ်စ်မော်ရာရဲ့ကန်ချက်ကိုလေထဲမှာ ခုန်ပျံကာကာကွယ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူးကပ်စ်မော်ရာရဲ့ကန်ချက်မှာပြင်းထန်လွန်းမှုကြောင့် ရမ်ဒဲလ်ကထိကာနောက်သို့ပုတ်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်အပေါ်ဘားကိုထိသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ စပါးစ်က၃-၁ဂိုးဖြင့်ရှုံးနိမ့်နေချိန်မှာလူးကပ်စ်မော်ရာဟာဧရိယာထိပ်ကနေကန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီ းအိန်စလေမိုင်လန်းနေးလ်နဲ့ထိပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရမ်ဒဲလ်ကကာကွယ်လိုက်တာတောင် ဘားထိသွားပြီးဧရိယာအတွင်းပြန်ကျခဲ့ပေမယ့် ညာနောက်ခံလူတိုမီယာဆုကချက်ချင်းအလျှင်အမြန်ထောင့်ကန်ဘောလုပ်ကာရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နွေရာသီတွင်ပေါင်သန်း၃၀ဖြင့်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရမ်ဒဲလ်ဟာယင်းကာကွယ်မှုအတွက်ပရိသတ်များရဲ့ ချီးကျူးခြင်းခံနေရပါတယ်။သူဟာလာမယ့်ပွဲစဉ်များမှာလည်းအာဆင်နယ်ရဲ့ နံပါတ်တစ်ဂိုးသမားအဖြစ်ဆက်လက်ကစားခွင့်ရလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ZawGyi စပါးစ္ႏွင့္ပြဲမွာ ယခုရာသီ အေကာင္းဆုံးကာကြယ္မႈျဖစ္လာဖို႔ရွိတဲ့ ကာကြယ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရမ္ဒဲလ္ ေအ႐ြန္ရမ္ဒဲလ္ဟာမေန႔ညတုန္းကစပါးစ္ႏွင့္ေျမာက္လန္ဒန္ဒါဘီပြဲစဥ္မွာယခုႏွစ္ပရီးမီး ယားလိဂ္ရာသီရဲ႕အေကာင္းဆုံးကာကြယ္မႈျဖစ္လာဖို႔ရွိေနတဲ့အေကာင္းဆုံးကာကြယ္မႈတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဆင္နယ္ဂိုးသမားဟာပြဲၿပီးခါနီး၉၁မိနစ္မွာလူးကပ္စ္ေမာ္ရာရဲ႕ကန္ခ်က္ကိုေလထဲမွာခုန္ပ်ံက ာကာကြယ္သြားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။လူးကပ္စ္ေမာ္ရာရဲ႕ကန္ခ်က္မွာျပင္းထန္လြန္းမ ႈေၾကာင့္ရမ္ဒဲလ္ကထိကာေနာက္သို႔ပုတ္ထုတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္အေပၚဘားကိုထိသြားခဲ့ပါေသးတယ္။ […]
ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်ဟင်နရီရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ ဟင်နရီကဲ့သို့ အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ အော်ဘာမီယန်
အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်အော်ဘာမီယန်ဟာမနေ့ညတုန်းကလန်ဒန်မြို့ခံပြိုင်ဘက် စပါးစ်နှင့်ပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ပြီးနောက် ဂန္ထဝင်ကစားသမားဟင်နရီရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပ င် ဟင်နရီကဲ့သို့အောင်ပွဲခံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းခေါင်းဆောင်ဟာတန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေဘယ်ခြေနဲ့ ထောင့်ကျဉ်းသို့ကန်ပြီးအာဆင်နယ်အတွက်ဒုတိယဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အော်ဘာမီယန်ဟာဂိုးသွင်းယူနိုင်ပြီးနောက်အမ်းမရိတ်ကွင်းမြက်ခင်းပေါ်မှာဒူးထောက်ရင်း လက်သီးဆုပ်ကာဟင်နရီကဲ့သို့အောင်ပွဲခံမှုပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဟာဟင်နရီအောင်ပွဲခံတဲ့ပုံကိုအမ်းမရိတ်ကွင်းအပြင်ဘက်မှာလည်းရုပ်ထုထုလုပ်ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ အာဆင်နယ်နှင့်စပါးစ်ပွဲစဉ်ကိုဟင်နရီကိုယ်တိုင်လည်းလာရောက်ကြည့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အော်ဘာမီယန်ရဲ့အောင်ပွဲခံမှုအပေါ်ကျေနပ်အားရနေပါတယ်။ စပါးစ်နှင့်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်ဟာ၃-၁ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်ဟာစမတ်ရိုဝီရဲ့ဂိုးနဲ့ပွဲကိုဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအော်ဘာမီယန်နှင့်ဆာကာတို့က ဂိုးသွင်းခဲ့ကြကာစပါးစ်အတွက်နှစ်သိမ့်ဂိုးကိုဆန်ဟောင်မင်းကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ZawGyi စပါးစ္ႏွင့္ပြဲတြင္ ဂိုးသြင္းၿပီးေနာက္ ဂႏၴဝင္ကစားသမားဟင္နရီကဲ့သို႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ ေအာ္ဘာမီယန္ အာဆင္နယ္အသင္းေခါင္းေဆာင္ေအာ္ဘာမီယန္ဟာမေန႔ညတုန္းကလန္ဒန္ၿမိဳ႕ခံၿပိဳင္ဘက္စပါး စ္ႏွင့္ပြဲစဥ္မွာဂိုးသြင္းယူႏိုင္ၿပီးေနာက္ ဂႏၴဝင္ကစားသမားဟင္နရီရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ ပင္ […]